September 14, 2021 N88LeaveaComment on टिकटक बनाउने क्रममा सेती नदीमा खसेर नवविवाहित पवित्रा लम्साल बे’पत्ता (भिडियाेसहित)
तनहुँ । टिकटक बनाउने क्रममा सेती नदीमा खसेर आज तनहुँमा एक किशोरी बेप’त्ता भएकी छन् । शुक्लागण्डकी नगरपालिका–८ लालिमकी १९ वर्षीया पवित्रा लम्साल बे’पत्ता भएको इलाका प्र’हरी कार्यालय बेल चौताराले जनाएको छ । शुक्लागण्डकी नगरपालिका–८ पुलचोकस्थित सेतीनदी किनारमा रहेको रक गार्डेनमा टिकटक बनाउने क्रममा उनी खसेर बेपत्ता भएकी हुन् । आफ्ना दुई साथीसँग घुम्नका लागि […]
निपा भाइरसको जोखिममा काठमाडौं र भक्तपुर !
September 14, 2021 N88LeaveaComment on निपा भाइरसको जोखिममा काठमाडौं र भक्तपुर !
डा शेरबहादुर पुन भारतको केरला राज्यमा केही दिनअगाडि एक १२ वर्षीय बालकको निपा भाइरसका कारण मृत्यु भएको पुष्टि भयो। कोरोना महामारी प्रवेश गर्नु एक वर्षअगाडि पनि सोही राज्यमा निपा भाइरसका कारण कम्तीमा १७ जनाको मृत्यु भएको थियो। नेपाल सरकारले पनि केही दिन अगाडि मात्र निपा भाइरसविरूद्ध सतर्कता अपनाउन र शंकास्पद बिरामी देखिए नमूना संकलन गर्न […]
बाबुराम भट्टराई भन्छन्, ‘अब सत्ता गठबन्धन धेरै दिन टिक्दैन्’
September 14, 2021 N88LeaveaComment on बाबुराम भट्टराई भन्छन्, ‘अब सत्ता गठबन्धन धेरै दिन टिक्दैन्’
काठमाडौं । जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई राजनीतिक शक्ति र परिचर्चाको केन्द्रका पात्र हुनुहुन्छ । जनचोर्माबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरे का भट्टराई माओवादी, नयाँ शक्ति, संघीय समाज वादी हुँदै अहिले जसपामा हुनुहुन्छ कुनै समय थियो, उहाँलाई नेपाली राजनीतिका दूरदर्शी, पढेका, बुझेका नेता मान्नेको जमात बाक्लै थियो । तर, माओवादी त्यागेर दलबदलमा लागेपछि […]
पाथिभरा देवीको दर्शन गर्नेहरुको चहलपहल बढयो
September 14, 2021 N88LeaveaComment on पाथिभरा देवीको दर्शन गर्नेहरुको चहलपहल बढयो
ताप्लेजुङ । प्रसिद्ध पाथिभरा देविको दर्शन गर्नेहरुको चहलपहल बढेको छ । कोरोना भाईरसको दोश्रो लहर चलेपछि दर्शन गर्न रोकिपनि पछिल्लो दिनमा पाथिभरा देविको दर्शन गर्न आउनेको संख्या बढ्दै गएको हो । मौसम खुल्दै गएको छ, हिमाल छर्लङ देखिन थालेका छन् । कोरोना भाइसरका कारण सुनसान रहेको पाथीभरामा अहिले नेपालका विभिन्न जिल्लाबाट दर्शनार्थीहरु आईपुगेका हुन । […]
एमसीसी पास नहुने पक्का भएपछि नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउने सक्ने अमेरिकाको चेतावनी…!
September 14, 2021 N88LeaveaComment on एमसीसी पास नहुने पक्का भएपछि नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउने सक्ने अमेरिकाको चेतावनी…!
काठमाडाैं । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एससिसी) की उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले नेपालले एमसिसी अनुदान अस्वीकार गरे वैदेशिक सहयोग रोकिने चेतावनी दिएकी छन् । नेपालमा एमसिसी आयोजनाबारे च’र्को वि’वाद भइरहेको बेला गत बिहीबार नेपाल आएकी सुमारले मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल ९एमसिए० का पदाधिकारीसँगको छलफलमा यस्तो चेतावनी दिएकी हुन् । आफ्नो चारदिने भ्रमणमा सुमारले प्रधानमन्त्री […]
September 14, 2021 N88LeaveaComment on टुंगियो माधव नेपालको पार्टी “एस”बाट मन्त्री बन्नेहरुको अन्तिम नेम-लिष्ट, को-को परे ?
काठमाडाैं । नेकपा एमालेबाट विभाजित भइ एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेको माधव नेपाल पक्षले सरकारमा माओवादी बराबरकै हैसियतामा सहभागिता पाउने भएको छ । सत्ता गठबन्धनबीच मन्त्रालय बाँडफाँट लगभग टुंगिएको छ । साबिक एमाले स्थायी कमिटी सदस्यबाट सरकारको नेतृत्व गर्दा मुकुन्द न्यौपाने र बेदुराम भुसाल छन् । न्यौपाने प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक सांसद हुने भने भुसाल राष्ट्रियसभा सदस्य […]
अब १४ महिनापछि त चुनाव आउला नि – एमाले अध्यक्ष ओली
September 14, 2021 N88LeaveaComment on अब १४ महिनापछि त चुनाव आउला नि – एमाले अध्यक्ष ओली
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तासिन गठबन्धन चुनाव भनेपछि थर्रथर्री कामेको बताएका छन् । उनले एमालेको नेतृत्वमा देशले असाधारण प्रगति गरेको पनि दाबी गरेका छन् । आज (मंगलबार) नेकपा एमाले झापा जिल्लास्तरीय अगुवा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले आफूहरुले गरेको विकासको कामले प्रतिक्रियावादीहरु पागल बनेको टिप्पणी गरे । […]
भीम रावलले आफूनिकटलाई सोधे – एमाले छोडौं कि नछोडौं ? जवाफ पाए यस्ताे !
September 14, 2021 N88LeaveaComment on भीम रावलले आफूनिकटलाई सोधे – एमाले छोडौं कि नछोडौं ? जवाफ पाए यस्ताे !
काठमाडौँ । एमाले विभाजन भएपछि उपाध्यक्ष भीम रावल पहिलोपटक सुदूरपश्चिम पुगेका छन् । उनलाई त्यहाँका कार्यकर्ताहरुले पार्टी कार्यालय पुर्याएका छन् । पार्टी कार्यालय पुगेका रावल अहिले नेताहरुसँग छलफलमा व्यस्त देखिएका छन् । एमाले सुदूरपश्चिमको इन्चार्जका विषयमा विवाद भएपछि उनी त्यहाँ पुगेका छन् । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग कुरा नमिलेपछि पार्टी छाड्ने मूडमा पुगेका रावलले त्यहाँका […]
एमाले सांसद गंगा चौधरी जे’ल जाने पक्का !
September 14, 2021 N88LeaveaComment on एमाले सांसद गंगा चौधरी जे’ल जाने पक्का !
काठमाडौँ । नेकपा एमालेकी सांसद गंगा चौधरीको पोल खुलेको छ । उनले यतिसम्म अपराध गरेको सार्वजनिक भएपछि सबैजना चकित भएका छन् । नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य एवम् प्रतिनिधि सभा सांसद चौधरीले दोस्रो बिहे गरेर आफ्नै ‘सौता’लाई दास बनाएर राखेको खुलासा भएको हो । सांसद चौधरीले दाङको राप्ती गाउँपालिका ७ बस्ने प्रहरी जागिरे नन्दलाल चौधरीसँग बिहे […]